Qajaarka koraya ee foosto | December 2019
Ku soo kordhay kufsi ee Ukraine ee hadda waa mid faa'iido leh.
Editor Ee Doorashada December 11,2019
Ugu Weyn Ee Qajaarka koraya ee foosto
Sida loo koro qajaarka foosto: beerto, daryeel, goosashada
Wixii koritaanka beerta qudaarta isticmaalaan noocyo kala duwan ee farsamooyinka agrotechnical. Milkiilayaasha guryaha guryaha iyo cariishyada yaryar ayaa bilaabay inay koraan khudradda iyo geedo yaryar oo ku jira weelal kala duwan. Beerista qajaarka ee foostada waxay noqotey hab balanqaad ah oo caan ah. Faa'iidooyinka Kobcinta qajaarka ee foosto waxay leedahay faa'iidooyin badan oo ku saabsan beeritaanka caadiga ah ee sariiraha: keydinta goobta; Foostada waxaa lagu dhejin karaa meel kasta oo haboon, xitaa dhinaca aalkol ama aag caan ah; helitaanka goosashada hore; fududeeyso abaabulka waraabinta iyo daryeelka; isticmaalka bacrimin yar; qajaarka waa nadiif ah oo fududahay in la uruuriyo; looma baahna haynta; beeritaanka waxyeelo soo gaartay cayayaanka iyo miraha carrada; Foostadaasi waa qurxiyo beerta weyn, haddii ay fiicantahay in la rinjiyo iyo rinjiga.
Sida loo cabbiro heerkulka jidhka ee bakaylaha iyo waxa ay yihiin caadooyinka
Fennel ama dill - sida loo helo khilaafaadka
"Label" - kala duwanaanta baradhada, waxa loola jeedaa horraantii iyo sareeyaba. Tayada haynta haynta, tayada sare ee miraha iyo heerka ugu yar ee diidmadu waxay samaysaa baradho ku habboon taranta warshadaha. Beeritaanka suurtagalka ee beeraha iyo beeraha gaarka loo leeyahay. Ogow dhammaan macluumaadka hadda ee ku saabsan noocyada kala duwan ee baradho labadaba leh sawiro iyo sharraxaad ku saabsan boggeena. Read More
Dabeecadda dabiiciga ah: waxa xayawaankaas xayawaanku cunaan
Beeralayda Tomsk ayaa ballaarin doona liiska beeraha ee dhoofinta
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Qajaarka koraya ee foosto 2019